अस्ट्रेलियामा रहेका दमकका युवा निरौलाले ल्याए ४० बर्ष अघिको कथामा आधारित यस्तो गीत, भिडियो::Hamrodamak.com
अस्ट्रेलियामा रहेका दमकका युवा निरौलाले ल्याए ४० बर्ष अघिको कथामा आधारित यस्तो गीत, भिडियो
४० बर्ष अघि जतिबेला देशमा स्व. राजा श्री ५ बिरेन्द्रबिक्रम शाह थिए उक्त बेलाको एक साझको कथामा आधारित काजीको घोडा बोल रहेको एक गीतको म्युजिक भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ ।
लामो समय देखि अस्ट्रेलियामा कर्मभूमि बनाउदै आएका झापा दमकका डा. रामकृष्ण निरौलाको सुमधुर आवाजमा रहेको गीतलाई युटुव मार्फत बाहिर ल्याईएको हो ।
फरक शैली, उत्कृस्ट शब्द चयन, नौलो आवाज र निक्कै मेहनतमा पुरानै शैलीमा तयार गरिएको गीतको भिडियोले गीत संगीत पारखीहरुलाई नयाँ स्वाद दिने निर्माण टिमले बताएको छ ।
बिकाश इन्टरटेटमेन्टले बजारमा ल्याएको गीतको भिडियोमा चर्चित टिम भिमफेदी गाइजको प्रस्तुति रहेको छ भने नायिका स्वस्तिमा खड्का, जुना सुन्दास, संजु शाह लगायतले साथ दिएका छन् ।
भुवन शिवाकोटीको शब्द र आरसी थापाको संगीतमा गीतको भिडियोलाई बिकाश सुबेदीले निर्देशन गरेका छन् ।
हेर्नुहोस उक्त फरक शैली रहेको गीतको यो भिडियो